Ixesha kunye nabahlobo 50
Oko kuya kuxhomekeka kwisizathu nakwimo yendoda. Akusoloko kufanelekile ukuzama ukutshabalalisa okanye ukubulala umnqweno wesini; kodwa kusoloko kungcono ukuyinqanda kwaye uyilawule. Ukuba umntu akanayo into okanye ulungile ongaphezulu kunokwesini; ukuba umntu ulawulwa yindalo yesilwanyana; kwaye ukuba umntu uphila kwaye ufuna ukonwaba, ukuhlala ixesha elide ecinga ngezinto ezonwabisayo zesondo, akunakwenzeka ukuba azame ukutshabalalisa okanye ukubulala iminqweno yakhe yesini-nangona "enokuphila ubomi bokungatshati."
Ngokwe- "Diction standard," ukungatshati kuthetha, "imeko yomntu ongatshatanga okanye ongatshatanga naye, ngakumbi umntu ongatshatanga; ukungavumi emtshatweni; njengoko, ukungatshati kobubingeleli. ”I-celibate kuthiwa," uhlala engatshatanga; ngakumbi umntu obopha ubomi obutshatileyo ngenxa yezibhambiso zonqulo. ”
Umntu onesidima ngokwasemzimbeni nangokwengqondo ukuba atshatele, kodwa ophila ubomi bokungatshati ukuze abaleke ubudlelwane, uxanduva kunye neziphumo zomtshato, kwaye ongathandiyo okanye umnqweno wokulawula ubunjani bakhe bezesondo, uhlala enesibetho ku ubuntu, nokuba unguye okanye akakhululekanga kwizithembiso, nokuba unazo okanye azithathanga iiodolo kwaye uphantsi kwokhuseleko nokhuselo lwecawe. Ubunyulu nokucoceka kwengcinga kubalulekile kubomi bokungatshati kulowo unokungena kumoya wobomi. Kukho i-celibates ezimbalwa, abangatshatanga, abangaphantsi kwamakhoboka kwiingcamango kunye nezenzo zesondo kunabo bahlala kwindawo yokutshata.
Abantu abaziva bengekho ekhaya emhlabeni nabaziphethe kakuhle ngokwasemzimbeni, ngokuziphatha, ngokwengqondo, ekutshateni, bahlala bengahoyi imisebenzi kunye noxanduva oluhlala ngokunga tshatanga. Isizathu sokuba umntu aphile ubomi bokungatshati asifanele: ukukhululwa kumxokelelwano, uxanduva, uxanduva, ngokusemthethweni okanye ngenye indlela; Izibhambathiso, uloyiso, imiyalelo yezenkolo; ukufumana ubungakanani; ukufumana umvuzo; ukufumana amandla enyuka okomzuzwana okanye okomoya. Isizathu sokuphila ubomi bokungatshati kufuneka: kukuba umntu angakwazi ukwenza imisebenzi abe eyenzile kwaye unqwenela ukuyenza, kwaye kwangaxeshanye athembeke kwimisebenzi ebandakanyekileyo kwilizwe elitshatileyo; Oko kukuthi, ubomi bomtshato abumfanele. Oku akuthethi ukuba umsebenzi othile wefashoni okanye owesininzi unesizathu sokugcina umntu ongatshatanga. Akukho msebenzi okanye msebenzi yiwaranti yokutshata. Umtshato awuthinteli kwinto ebizwa ngokuba bubomi “benkolo” okanye “bokomoya”. Iiofisi zenkolo ezinokuziphatha zinokuzaliswa ngabo batshatileyo njengabantu abangatshatanga; kwaye kaninzi ngokukhuseleka ngakumbi kulowo uvuma uvumo kwaye uvumile kunexesha lokuvuma ukuba ungatshatanga. Umntu otshatileyo uhlala enobuchule bokunika ingcebiso kunalowo ungangeniyo kwisini esitshatileyo.
Ukungatshati kuyafuneka kulowo ozimisele ukufumana ukungafi. Kodwa ezona njongo zakhe ziphila kangaka, kukuba uya kuthi alusebenzise ngcono uhlobo lomntu. Isivumo asiyindawo yalowo uza kungena kwindlela yobomi bokungafi; kwaye xa esendleleni uza kuba nomsebenzi obaluleke ngakumbi. Lowo ukufaneleyo ukuphila ubomi bokungatshati akasayi kuba nokungaqiniseki ukuba yintoni umsebenzi wakhe. Umntu ofanelekileyo ukuba aphile ubomi bokungatshati akhululekanga kwiminqweno yesini; kodwa akazami ukuyityhoboza okanye ukumbulala. Ufunda indlela yokubuyisela kunye nokulawula, Oku ufunda kwaye akwenze ngobukrelekrele kunye nentando. Umntu kufuneka aphile ubomi bokungatshati ekucingeni, ngaphambi kokuba abe enyanisweni. Emva koko uphilela bonke, ngaphandle kokulimala yena okanye abanye.